कक्षा १२ को परीक्षा अनलाइनबाट नभइ भौतिक उपस्थितिमै हुने « Dainiki
५ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०८:०६
कक्षा १२ को परीक्षा अनलाइनबाट नभइ भौतिक उपस्थितिमै हुने
५ मंसिर, काठमाडौँ । कोरोना संक्रमणको महामारीले स्थगित कक्षा १२ को परीक्षा अनलाइनबाट नभइ भौतिक उपस्थितिमै हुने भएको छ । स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाइ दूरी कायम गर्दै कक्षा १२ का विद्यार्थीको अन्तिम परीक्षा भौतिक उपस्थितिमा नै लिइने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएकाे छ ।
विद्यार्थीलाई भौतिक उपस्थितिमा नै परीक्षा लिन कुनै समस्या नभएको र त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिए । परीक्षा सञ्चालन हुन लागेका ५० जिल्लाका परीक्षा केन्द्रमा प्रश्नपत्र पनि पठाइसकेको पौडेलले बताए । नजिकका परीक्षा केन्द्रमा भने परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा आधा घण्टा अगाडि मात्रै प्रश्नपत्र पठाइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
गत वैशाखमा स्थगित भएको कक्षा १२ को परीक्षा यही मंसिर ९ गतेबाट सञ्चालन हुँदैछ । कक्षा १२ को परीक्षामा विभिन्न ७३ वटा विद्यालयमा ५ सयभन्दा बढी परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन् । कक्षा १२ को परीक्षा मंसिर १६ गते सकिने छ ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सदस्यहरुले सार्वजनिक गर्न मिल्दैनः पूर्वमन्त्री तुलाधर
१९ मंसिर, काठमाडाैँ । पूर्व शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आयोगकै
१९ मंसिर, काठमाडाैँ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि आयोगका
भौतिक उपस्थितिमा नै नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न सबै क्याम्पसलाई त्रिविकाे निर्देशन
१८ मंसिर, काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विद्यार्थी र शिक्षकको भौतिक
त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षा पुनः विवादमा, सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर
१७ मंसिर, काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले विभिन्न अध्ययन संस्थान र सङ्कायका लागि लिएको